Isla Canela oo ku taal Huelva: geeska dabiiciga ah ee cajiibka ah | Wararka Safarka
Isla Canela oo ku taal Huelva
Luis Martinez | | Meelaha Dalxiiska loo tago
Afka Guadiana ee Ayamonte
Isla Canela, gudaha Huelva, wuxuu ku yaal aag mudnaan gaar ah u leh Jasiiradda Iberian. Dhinaceeda woqooyi waa xuduud Ayamonte koonfurna waxay ku siisaa wax aan ka yarayn toddobo kiiloomitir oo xeebo ay maydhaan Badweynta Atlaantik. Taabadalkeed, dhanka galbeed waxay xuduud la leedahay Wabiga Guadiana, halka barigu u sii dhowaanayo Isla Cristina.
Sidaa darteed, waa deegaan ka mid ah kuwa quruxda badan Costa de la Luz waana hal talaabo Algarve Boortaqiis. Si gaar ah loogu diyaariyay dalxiiska, waxay ku siineysaa hudheelo wanaagsan, koorsooyin golf, marina iyo jidad aad ku sameyso lug, baaskiil ama faras. Haddii aad rabto inaad ogaato meel mudnaan leh sida Isla Canela oo ku taal Huelva, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad na raacdo.
1 Waxa lagu arko laguna sameeyo Isla Canela (Huelva)
1.1 Akhlaaqda Punta del
1.2 Xaafadda Canela
1.3 Las Salinas del Duque, waa goob dabiici ah oo cajiib ah oo ku taal Isla Canela (Huelva)
1.5 Xeebaha Isla Canela (Huelva)
1.6 Koorsooyinka Golf
2 Goorma ayey fiicantahay in la aado Isla Canela (Huelva)
3 Sida loo tago Isla Canela
4 Waxa lagu cuno Isla Canela
Waxa lagu arko laguna sameeyo Isla Canela (Huelva)
Marka lagu daro aagga dalxiiska, Isla Canela waxaa ku yaal laba xarumood. Iyo sidoo kale goob dabiici ah oo aan la barbardhigi karin, taas oo ah Salinas del Duque, oo leh meelaheeda dhaadheer ee ay ku noolyihiin noocyo badan oo shimbiro ah. Waxaan dooneynaa inaan waxbadan ka ogaanno.
Akhlaaqda Punta del
Waa aagga taariikhiga ah ee Isla Canela wuxuuna xuduud la leeyahay Ayamonte. Waxaa la rumeysan yahay in la aasaasay qarnigii XNUMXaad oo ah magaalo kalluumeysi, in kasta oo ay horay u deganaayeen. Xaqiiqdii, mid ka mid ah soojiidashada waa Roman Mausoleum. Taariikhaysan qarnigii XNUMXaad ee miilaadiga, waxay ka mid noqon lahayd dhisme weyn oo ay ku jiri lahayd warshad kalluun.
Roman Mausoleum ee Punta del Moral
Ka tagida magaaladan dhanka Ayamonte, sidoo kale waad arki kartaa Muna Canela Tower, Dhufeys difaac ah si looga hortago duulaanka burcad badeeda. Waa munaarad iftiin leh oo la dhisay intii u dhexeysay qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad. Xilligan, waxay ku qoran tahay taallo.
Sidoo kale u heellan kalluumeysiga, waxaad ka arki kartaa dhexdeeda Kaniisadda Our Lady of Carmen, oo la dhisay bilowgii qarnigii XNUMX-aad hadhaagii mid ka weyn. Sida magaceeda ka muuqata, waxaa ku yaal sawir ka Gabar Carmen ah, mucaawinada badmaaxiinta, kuwaas oo loo qaado si taxaddar leh sanad walba bisha Luulyo 16.
Las Salinas del Duque, waa goob dabiici ah oo cajiib ah oo ku taal Isla Canela (Huelva)
Salinas del Duque waa deegaan dabiici ah oo cajiib ah oo ay sameeyeen marsooyin oo ay ku nool yihiin noocyo ka mid ah shimbiraha biyaha ku dhex nool oo buul ku leh kuna dhex dhalanaya. Waad ku booqan kartaa iyaga oo lugeynaya ama baaskiil ku dhex maraya jidadka cagaaran loo sameeyay ujeedkan oo arag noocyada sida flamingo, osprey, tern ama cormorant. Waxaad sidoo kale dooran kartaa inaad ku sameyso doomo yaryar.
Waa caasimada degmada ay Isla Canela ka tirsan tahay. Waa magaalo yar oo qiyaastii labaatan kun oo qof deggan ay ka buuxdo soo jiidasho iyo taallooyin qurux badan. Waxaa laga yaabaa in calaamadaha ugu badani ay yihiin Qalcadda Ayamonte, oo la dhisay qarnigii saddex iyo tobnaad oo dib loogu soo celiyey inuu noqdo parador de turismo.
Plaza de la Laguna oo ku taal Ayamonte
Laakiin sidoo kale waxay iftiiminaysaa Baluarte de las Angustias, nasasho darbigii hore ee magaalada iyo in ku xiga kaniisad isla magacaas, dhisme qurux badan oo qarnigii XNUMX-aad kaas oo dhismaheeda Renaissance iyo Baroque uu ka muuqdo. Waxa kor ku xusan, taallooyin kale oo ay tahay inaad ku aragto magaaladan ayaa ah La Merced convent iyo kaniisad, laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad, iyo tan Walaalaha saboolka ah ee Clare; kaniisadaha ee San Francisco iyo Salvador, lagu dhawaaqay Hantida Danaha Dhaqanka; kaniisadaha San Antonio iyo Socorro, iyo sidoo kale guryaha sharafta leh ee Marquis ee Ayamonte y Grande, laga bilaabo qarniyadii toddobaad iyo siddeed iyo tobnaad siday u kala horreeyaan.
Xeebaha Isla Canela (Huelva)
In kasta oo waxaas oo dhan la yidhi, meelaha ugu soo jiidashada badan magaalada Huelva waa xeebteeda quruxda badan, oo deggan toddobo kilomitir, sidaan kuu sheegnay. Baaqa ayaa dhexdooda ka muuqda Xeebta Isla Canela oo leh ciiddeeda dahabka ah iyo biyaheeda cad. Waxay leedahay dherer ah kiiloomitir iyo badh iyo ballac afartan mitir ah. Haddii aad rabto inaad ogaato oo aad qubeysato, waxaad xiiseyn doontaa inaad ogaato inay ku qalabeysan tahay dhammaan adeegyada, laga soo bilaabo badbaadinta illaa musqulaha dadweynaha, iyo in biyaheeda ay deggan yihiin.
Haddii aad jeceshahay inaad ku ciyaarto golf, Isla Canela (Huelva) waxaad ka heli doontaa meel aan fiicnayn. Waxay leedahay laba beerood oo isku dhafan marsooyinka naftooda, the Xiriiriyaha Dooxada Guadiana iyo Koorsadii Hore ee Isla Canela, labadaba siddeed iyo toban godad. Dhexdooda waxaad kaloo ku leedahay makhaayado iyo xitaa hudheel.
Salinas del Duque Park Dabiiciga ah
Haddii aad booqato Isla Canela, ma seegi kartid fursadda ah inaad barato Boortaqiiska Algarve, oo talaabo u jirta. Waa gobolka dalxiis ee heer sare ah ee waddanka deriska ah sidoo kale wuxuu leeyahay xeebo qurux badan iyo dabeecad mudnaan leh.
Intaas waxaa sii dheer, waad booqan kartaa meelaha sida quruxda badan leh Vila Real de Santo Antonio, oo ku taal dhinaca kale ee Guadiyana; Faro, oo leh cathedral qurux badan; Portimao, caan ku ah xeebaha, ama Tavira, oo leh magaalo qurux badan oo duug ah.
Goorma ayey fiicantahay in la aado Isla Canela (Huelva)
Jasiiradda Huelva waxay leedahay a cimilo dhexdhexaad ah. Jiilaalku way wacan yihiin, celcelis ahaan heerkulkoodu waa kow iyo toban darajo Celsius, iyo kuleyl kulul, oo celcelis ahaan ay ku dhow yihiin shan iyo labaatan, in kasta oo aysan ahayn wax aan caadi ahayn inay ka badan yihiin soddon.
Astaamo aad loogu calaamadeeyay cilmiga cimilada ee aaggan ayaa ah qoyaan, taas oo mararka qaar kor u kacda boqolkiiba boqol. Waxaas oo dhan, waxaan kugula talineynaa inaad ku booqato primavera. Uma kulul sida xagaaga mana jiro culeys dalxiis oo aad u badan.
Sida loo tago Isla Canela
Isla Canela waxay ku taal qiyaastii konton kiilomitir Garoonka diyaaradaha Faro, midka ugu dhow. Laakiin si aad ah ayey uguxirantahay wadada. Midka ugu weyni waa wadada A-49, taas oo ka timaadda Sevilla wuxuuna gaaraa xadka Boortaqiiska.
Haddii aad doorbideyso inaad ku safarto tareen, waxaad xiiseyneysaa inaad ogaato in rugta kuugu dhow ay tahay Huelva, laakiin waa lixdan kilomitir. Si aad safarkan u sameyso, si kastaba ha noqotee, waxaad leedahay adeeg raaxo leh basaska.
Waxa lagu cuno Isla Canela
Sidee bay noqon kartaa haddii kale, cunnada Isla Canela ayaa ahmiyad weyn u leh kalluunka iyo cunnada badda ee deegaanka. Kuwa ay Sardines la dubay, oo caan ah kalluun shiilan iyo iyaga xarig yar. Faahfaahin dheeraad ah waa saxamada sida karbaash on paprika iyo tuna ayamontina. Waxaas oo dhan iyada oo aan la iloobin kuwii caanka ahaa prawns reer Huelva.
Sida macmacaanka, the Coca, oo lagu diyaariyey yicib iyo timo malag, iyo borachuelos, oo la mid ah pestiños. Si aad u cabto, waxaad leedahay khamriga degmada, kuwaas oo leh astaamo u gaar ah oo asal ah.
Gabagabadii, Isla Canela ee Huelva waa a meel idyllic ah si aad ugu raaxeysato inaad ku raaxeysato xeebaheeda quruxda badan iyo koorsooyinka golf-ka. Laakiin sidoo kale si aad u ogaato marsooyinka aan caadiga ahayn ee Ayamonte iyo Boortaqiiska Algarve.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Meelaha Dalxiiska loo tago » Isla Canela oo ku taal Huelva
Maxaa laga iibsadaa Masar